Muhiimadda Naxwaha Wanaagsan iyo Xarakaynta Blogging | Martech Zone
Dadka i garanaya way ogyihiin inaan yara noqon karo naxwaha iyo xarakaynta. In kasta oo aanan u sii socon doonin sida saxda ah ee aan u sixi lahaa dadka (waxaan si gaar ah ugu canaantaa iyaga), waxaa la igu caan baxay in aan wax ka beddelo astaamaha ay ku jiraan ereyada khaldan, dib-u-dhigga khaldan, iyo guud ahaan khaladaadka khaldan.
Marka, looma baahna in la sheego, marwalba waxaan iskudayaa inaan hubiyo in qoraalkaygu uu gaadhayo naxwaha naxwaha.
"Xitaa on blogs?"
Haa, xitaa bogagga internetka.
"Laakiin baloogyada waxaa loo malaynayaa inay ahaadaan kuwo aan rasmi ahayn iyo wada hadal."
Ma aha inta aad u maleyn karto. Waxaa jira ganacsiyo badan oo isku duubaya qorista, waxayna isku dayayaan inay soosaaraan muuqaal ah kalsooni iyo kalsooni. Oo ha rumaystaan ​​ama ha rumaysanina, macaamiisha ayaa xukumi doona awood shirkadeed oo dhan inay ku sameyso xitaa hadafkeeda aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee naxwaha iyo higgaadinta mid ka mid ah heerka hoose ee PR.
“Allahayow, waxaad qaybisay shey! Mar dambe ma iibsan doonno wax soo saarkaaga! ”
Ha i aaminin? Fiiro gaar ah u yeelo faallooyinka ku saabsan bog kasta oo siyaasadeed inta lagu jiro doorashooyinka madaxweynaha.
In kasta oo aadan u baahnayn inaad nuujiso noocyadaas dadka ah (waxay u baahan yihiin in la buuxiyo halkii), waxaad u baahan tahay inaad sameyso muuqaal karti iyo xirfad-yaqaannimo ah. Taasina waxay ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad si sax ah u higgaadiso ereyada, oo aad u adeegsato naxwaha iyo xarakaynta saxda ah.
Waxaan mararka qaarkood u diri doonaa Doug a DM wax ku saabsan qaddarinta khaldan ama eray qaldan oo ku jira mid ka mid ah qoraalladiisa Teknolojiyada Suuq geynta (taas oo marka dib loo eego ay u badan tahay sababta Waa lay ciqaabayaa Waxaa la i weydiiyay inaan qoro maqaalkan).
Waxaa jira wax badan oo ka mid ah khaladaadka naxwaha oo haddii aad sameyso, si saraaxad leh kaaga dhigaya inaad carrab la 'tahay (Erayada Copyblogger, maahan tayda). Waxyaabaha ay ka mid yihiin vs. iyo adigu iyo kuwaaga ayaa ah khaladaad ay tahay inaad ka ogaato intaad samayn lahayd.
Dad badan ayaa oran doona naxwaha iyo higgaadinta baloogyada kaliya muhiim ma ahan. Taasi waxaan u malaynaynaa inaynaan rasmi ahayn oo dib loo dhigno, iyo in taasi aysan macno lahayn dambe.
Taasi way fiicantahay haddii aad wax ka qorayso baloog shaqsiyeed oo ku saabsan noloshaada, iyo inaad kaliya ka filaneyso saaxiibo kooban inay akhriyaan. Waxaad noqon kartaa mid aan rasmi ahayn sidaad rabto, qaladaad ku sameyso rabitaanka wadnahaaga, iyo xitaa ku buuxi qoraaladaada dhaar-yeelis-weli-xiise leh. (Fiirinaya aad, Bloggess.)
Laakiin haddii aad ka hadlayso meheraddaada, shirkaddaada, ama warshadahaaga, waxaad u baahan tahay inaad wax walba ka dhigto mid nadiif ah oo aan qalad lahayn sida ugu macquulsan.
Danbi maahan hadaad qalad sameyso. Waqtiyo badan baa markaan khaladaad ku sameeyay qoraaladayda, gaar ahaan kuwa aan kaga hadlo muhiimadda naxwaha wanaagsan iyo xarakaynta. Laakiin markasta waan ku noqon karaa oo waan nadiifin karaa. Taasi waa waxa ugu weyn ee ku saabsan qorista: waxba ma aha mid joogto ah, sida joornaal ama buug-yare. Waa dukumiinti taagan, oo nool. Dhacdo qoraallada jira saddex sano.
Marka hadaad khalad ama labo gaarto, ha quusan. Qof aad ku kalsoon tahay ha ku fiiriyo oo ku siiyo ra'yi-celin daacad ah. Kadib dib u laabo oo hagaaji wax kasta oo kaa maqnaa intii lagu gudajiray labadii wareeg ee ugu horreeyay ee tafatirka.
Sababtoo ah si sax ah ama khalad ah, nitpickers-ka ayaa halkaas jooga. Oo adigay kuu imanayaan.
Feb 6, 2010 markay ahayd 11:54 PM
Erayo kuma soo koobi karo inta aan uga mahadceliyo ishaada raadinta khaladaadkeyga! Waxaan u muuqdaa inaan wax ku qoro qulqulka miyir-qabka oo aan eego khaladaadkeyga anigoo si fudud u caddaynaya sidii markii aan qoray. Waa xoogaa habaar. Mahadsanid asxaabta!
Markaan taajir noqdo oo aan caan noqdo, waa inaan ku magdhabaa! 😀